Maitiro ekumanikidza kuvhara iko kunyorera paApple Watch | IPhone nhau
Maitiro ekumanikidza kuvhara app paApple Watch
Kazhinji hatimbofaniri kumanikidza kuvharwa kwechikumbiro paApple Watch, asi zvinokwanisika kuti chikumbiro chinotonhora kana chimwe chinhu chikaitika chinoda kutora matanho akasimba. Kana tikazviwana tiri mumamiriro nechikumbiro chisingashande sezvachinofanira kuita, hatifanire kunetseka sezvo Apple, sekune iyo iPhone, ichitipa nzira yakapusa yeku vhara iyo yakashata app uye dzokera kumba skrini.
Kumanikidza Anwendung kuvhara paApple Watch zvakanyatsofanana neiyo iPhone. Tichafanira kungochinja mubatanidzwa wemabhatani, bhatani repamba riri bhatani repadivi reApple Watch, izvo zvinotibatsira kuti tiwane vatinosangana navo mukushandisa chaiko.
Mukati mekushandisa, tinodzvanya nekubata bhatani repadivi kusvikira menyu yekudzima yaonekwa.
Kana iyo yekuvhara menyu ikaonekwa, tinosunungura bhatani.
Isu tinodzvanya uye kubata bhatani repadivi kechipiri kudzamara application yavhara uye isu todzokera kumba skrini.
Iyo Apple Watch inogonesa kunyorera uye zviwanikwa pasina kuda kupindira kwedu, saka isu tinoshandisa nzira iyi kazhinji kashoma. Zvine musoro, zvese software zvinogona kutadza uye zvinogona kubatsira zvakanyanya mukukanganisa kwatinoona maitiro asina kujairika mukushandisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Maitiro ekumanikidza kuvhara app paApple Watch
HackInApp, gadzirisa WhatsApp uye Instagram zvakadzama
Vintage kana chisingachashandi? Ona kana chako Apple chigadzirwa chiri mune urwu runyorwa